Diyaarad drone ah oo somalia Lagu sameeyey tii ugu horeeysay(First somalian homemade drone) | Xaqiiqonews
Diyaarad drone ah oo somalia Lagu sameeyey tii ugu horeeysay(First somalian homemade drone)
Diyaaradaha yar yar ee loo yaqaano drones-ka ayaa ah waxyaabaha biiba tan loogu isticmaalka badanyahay qarnigan 21-aad ee maanta aynu joogno balse marka ay sheegadu timaato wadamada afrika iyo kuwa carabta ama guud ahaan wadamada la isku yiraahdo dunida seddexaaad malahan shacbiyada badan diyaaradahani.
Injineer somali ah ayaa dhawaan iqtiraacay diyaarad yar oo drone ah gaar ahaan nooca sahlan ee lagu magacaabo Quadcopter isagoo isticmaalay qalabka diyaaradaha caruurta yar yar iyo waxyaabo si fudud guriga loogu heli karo.
Ka dib Qaladaad badan(crashes) ayaa waxa uu suurta gashay wiilkani injineerka ah in uu kiciyo diyaarad yar oo ka sameysan qalab sahlan oo guriga laga heli karo waxaana diyaaradani yar ay kor u kici kartaa ilaa 300 feet waxaana la xakumi karaa fogaan dhan ugu badnaan 1km.
Ka dib kulan hoose oo dhaxmaray injineerka iyo website-ka baahiya wararka Qarsoon iyo tiknoolijyadda ee xaqiiqonews waxa uu injineerkani ku qancay in uu bulshada la wadaago iqtiraaciisa cusub si arintaasi ay u dhacda waxa ay xaqiiqonews sameyn doontaa barnaamijyo taxano ah oo aan ku soo gudbin doona min bilow ilaa dhamaad qaabkii injineerkani uu sameeyey diyaaradda iyadoo muuqaal iyo qoraal isku jiro.
hadaba aqriste sheekadani ama ahan kaftan iyo mala awaal hana u qadaan war iska dheh ah si aad u ogaato xaqiiqda sheekadani fadlan isha ku haay website-ka xaqiiqonews maalmaha soo socda ayaana marqaati kugu filnaan doona